घाम ताप्दै बसेका फुर्सदिला कर्मचारी देखाउँदै सचिवले भने – फोटो खिच्नुस् उहाँहरूको ... !
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असहजता भएको भनिरहँदा कतिपय अड्डामा भने भएका कर्मचारी निकै फुर्सदिला देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथौं तथा बर्खे अधिवेशन समापन भएको ३ महिना बित्नै लाग्दा समेत हिउँदे अधिवेशन आह्वान नहुँदा प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी निकै फुर्सदिला भएका हुन् ।
बुधबार रिपोर्टिङको क्रममा लोकान्तरकर्मी सहितका केही सञ्चारकर्मी प्रदेशसभा सचिवालय पुगेका थिए । सञ्चारकर्मीसँगै रहेका प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले क्यान्टिन अगाडि बसेका कर्मचारीतर्फ औला तेर्स्याउँदै भने, ‘उहाँहरूको फोटो खिच्नुस् त ! विना टाइम त्यत्तिकै चिया खाँदैछन् ।’ ती कर्मचारी १ नबज्दै घाम तापेर चिया खाँदै गफिएका थिए ।
गत भदौ १ गते प्रदेश सभाको चौथौ अधिवेशन समापन भएको थियो तर हालसम्म प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन तोक्न नसकेको हो । प्रदेश सचिव धामीले संसदले बिजनेश नपाउँदा बैठक बस्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । पुस १० गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन शुरू गर्नेबारे छलफल चलिरहेको सचिव धामीले बताए ।
बैठक चल्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्य औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन् । गैरसरकारी संस्थाको तालिम, गोष्ठी, सभा, समारोह, मेला, महोत्सव उद्घाटनमा मन्त्री, सांसद व्यस्त देखिएका हुन् ।
बैठक चल्न नसकेको अवस्थामा आजभोलि कार्यक्रममै व्यस्त भएको बताउँदै एक जना प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘बैठक कहिले बस्ने ठेगान छैन । बैठक नबसेपछि जनताले बोलाएको कार्यक्रममा जानैपर्‍यो नि !’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म ३२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ती सबै विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।